Isithombo esifakwe emanzini anosawoti
I-ginger ye-sushi eqoshiwe
Izimila zasolwandle ezomisiwe zaseWakame
Izimila zasolwandle ezigazingiwe
Izinti zezinti zoSushi
Okunye Ukudla Kwe-Sushi
Ujinja Omile Womoya
I-sushi edayiswa nguHarris Teeter ixhunyaniswe nezifo ezingaphezu kuka-150
Izikhulu zeCabarrus Health Alliance (CHA) kanye neketanga legrosa uHarris Harris ziphenya imibiko engaphezu kuka-150 yezifo ezihlobene nesushi i-AFC esithengwe ezindaweni ezimbili zokudayisa eNorth Carolina. Labo abangaphilile babhekene nezimpawu zokuhlanza, uhudo, umkhuhlane, izinhlungu zemisipha ...
Umthelela wezinqubo zebhizinisi kanye nokuguqulwa kwenkampani okuqhutshwa ubuchwepheshe emakethe yezinongo zokudla ngo-2021 - IFF, Givaudan, Symrise, Robertet, HuaBbao, Firmenich, Tate & Lyle, JK S ...
Umbiko weMakethe Yama-Agents Wokudla we-2020 ufaka inhlanganisela ephelele yamathrendi angahlolwa kanye nokuhlaziywa kokubikezela. Lokhu kuhlaziywa kokunambitheka kokudla kunikeza indlela yenani elikhulu lamakhasimende. Ukuze uthole ngempumelelo futhi ucwaninge imakethe yokunambitheka kokudla eyaziwayo emhlabeni jikelele ...
Onguchwepheshe bokudla kwe-sushi kanye nabaphakeli bemikhiqizo ehlobene nokudla kwe-sushi
Jinan Laiwu Feifan ukuhwebelana kwamazwe omhlaba co., LTD. Ingabe umphakeli okhokhelwayo wokudla kwe-sushi kanye nemikhiqizo ehlobene nokudla kwe-sushi, besilokhu sisebhizinisi lokudla le-sushi iminyaka engaphezu kwengu-10, imikhiqizo yethu imboza imifino efakwe emanzini anosawoti (i-pickled sushi ginger, isithombo esimuncu, i-kanpyo enonisiwe, i-pickled cu ...
Ikheli: Cha. 200 yomgwaqo osenyakatho we-wanfu, isifunda sase-laiwu, idolobha laseJinan, isifundazwe saseShandong, eChina
Iselula / Wechat: 15163469878